Dalalka Jabuuti iyo Kenya oo midkoodna ku guuleysan kursiga Afrika ee Golaha Ammaanka QM… – Hagaag.com
Dalalka Jabuuti iyo Kenya oo midkoodna ku guuleysan kursiga Afrika ee Golaha Ammaanka QM…
Dalalka Jabuuti iyo Kenya ayaa ku guuldareystay dalkii meteli lahaa Afrika ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey.
Waxaa wax dooranayay dalalka xubnaha ka ah Qaramada Midoobey, oo tiradoodu ay gaareyso 193 dal, waxaana Jabuuti iyo Kenya laga doonayay in midkood uu ku guuleysto saddex meelood laba meel codadkii la dhiibtay.
Kenya ayaa waxay heshay 113 cod, halka Jabuuti ay iyana heshay 78 cod, taasoo aan midna u saamixin inay ku guuleysato doorashada Arbacadii ka dhacday Magaalada New York.
Khamiista maanta ayaa lagu wadaa in doorasho ku celis ah loo qabto labadaasi dalka, waxaana khasab ah in midkood uu ku guuleysto 128 cod, waana midda keliya ee kursigaasi uu ku hanan karo muddo laba sano ah.
Haddii Kenya ku guuleysato doorashada ku celiska ah ayaa noqoneysa markii 3aad ee dalkan Bariga Afrika ku yaala uu ka howlgalo xafiiska ugu sareeya ee Qaramada Midoobey.
Jamhuuriyadda Jabuuti waxay muujisay inay Kenya ku ciriirin karto kursigaasi, inkastoo ay walaac xoogan ka muujisay Ururka Midowga Afrika oo doorashada ku taageerayay Kenya.
Labada dalka ayaa muddooyinkii ugu dambeysay abaabul iyo tartanba ugu jiray, sidii uu midkood ugu soo bixi lahaa kurisgaasi, waxaase markale natiijada codbixiye-yaasha la dhawri doonnaa maanta oo Khamiis ah.